Rooble oo wax ka beddelay qorshaha amnigiisa gaarka ah | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya – Xogo hoose oo ay heshay Keydmedia Online, ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, uu wax ka beddel ku sameeyay qorshihiisa Amniga iyo guud ahaan hanaanka shaqo ee ilaaladiisa.
Saraakiil muhiim ah oo ka tirsan, hoggaanka amniga Madaxtooyada ayaa KON, u sheegay in Rooble, dib u eegis ku sameeyay amnigiisa gaarka ah, isla-markaana go’aansaday dhaqan galinta talooyin amni oo uga yimid saraakiil sirdoon oo ajaanib iyo Soomaali isugu jira.
Sida ay xuguhu muujinayaan, kadib soo if-bixii kiiskii Ikraan Tahliil, waxaa xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha soo gaarayay digniinno amni oo gudo iyo dibad-ba leh, waxaana Rooble, lagu wargaliyay inuu ka feejignaado khatarta muuqata.
Kadib, qarixii lagu dhaawacay, Maxamed Ibraahim Macalimuu, oo laf-dhabar u ahaa warbaahinta xaafiiska Ra’iisul Wasaraha, Rooble, wuxuu billaabay kulamo kala duwan oo uu la yeelanayo saraakiil amni.
Xogaha ayaa intaas ku daraya in Taliyaha dabagalka Nabad-sugidda Cabdullahi Daahir, oo loo yaqaan Cabdullahi Dheere, oo dhawaan Farmaajo iyo Fahad garabkooda ka baxay uu Rooble la wadaagay, go’aanno amnigiisa khatar ku ah oo kooxda waqtigu ka dhamaaday gaareen bishii September 2021.
Isla-bishaas qarax ka dhacay agagaarka Ceel-gaabta oo ka mid ah goobaha laga ilaaliyo Madaxtooyada ayaa lagu dilay Hibaaq Abuukar, oo ka mid ahayd shaqaalaha xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
20-kii November, waxaa la khaarijiyay Allaha u naxariistee, Agaasimihii Radio Muqdisho, Cabdicasiis Maxamuud Guleed [Afrika], halka dhawaac daran la gaarsiiyay agaasimihii Telefishinka Qaranka Soomaaliya [SNTV], Sharma’arke Maxamed Warsame, oo labaduba ku dhawaa xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Dhacdooyinkaan iyo kuwo kale oo uu ku jiro duullaankii 27-kii December 2021, lagu qaaday Xaafiiska RW Rooble, waxa ay sababtay in Wasiika 1-aad dib u eego khataha amni ee uu wajahayo.
Warar hoose, ayaa sheegaya in Cabdullahi Dheere, oo hadda ku wajahan Mareykanka, uu xogo badan la wadaagay saraakiil ka socota CIA-da Mareykanka, kadib markii amni ahaan loo geeyay Jabuuti bishii hore, taasi waxa ay sababtay in Mareykanku digniino amni siiyo Ra’iisul Wasaaraha.
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, waxa ay 31, January 2021, khaarijiyeen, Allaha u naxariistee Jeneral Maxamed Nuur Galaal, oo lagu dilay weerar ka dhacay Hotel Afriik, oo ku yaalla, Muqdisho, si ay uga hor tagaan dadaallo uu ku raadinayay xuquuqda dadka iyo degaanka uu ka soo jeedo.
F&F, Waxaa gacantooda ku maqan, Guddoomiyhii Gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Yariisow, Guddoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun, Taliyihii qaybta 21-aad ee CXDS Generaal Qooje-dagaari, Ikraan Tahliil, Saraakiil ciidan, iyo shaqsiyaad kale oo miisaan cules lahaa.